Nepali Christian Bible Study Resources - महिला पास्टरहरू / प्रचारिकाहरू?
» शिक्षा » महिला पास्टरहरू / प्रचारिकाहरू?
परमेश्वरको वचनले घोषणा गर्दछ, "स्त्रीले पूरा अधीनतामा बसेर चुपचापसँग सिकोस्। तर म स्त्रीलाई शिक्षा दिने अनुमति दिन्नँ, न ता पुरुषमाथि अधिकार जमाउने अनुमति नै दिन्छु; तर ऊ चुपचाप रहोस्" (१ तिमोथी २:११-१२)। मण्डलीमा परमेश्वरले स्त्री र पुरुषहरूलाई भिन्न भिन्नै भूमिकाहरू निर्दिष्ट गर्नुहुन्छ जुन कुरा चाहिँ मानव जातिको सृष्टिको ढाँचा र पाप संसारमा पसेको तरिकाको नतीजा हो (१ तिमोथी २:१३-१४)। प्रेरित पावलद्वारा परमेश्वरले स्त्रीहरूलाई, पुरुषहरूलाई सिकाउने वा पुरुषहरूमाथि आत्मिक अधिकार जमाउने भूमिकायुक्त सेवाकार्यदेखि बञ्चित गर्नुभएको छ। यसले स्त्रीहरूलाई पुरुषहरूमाथि प्रास्टरीय सेवाकार्य अभ्यास गर्नदेखि रोक लगाउँछ जसअन्तर्गत पुरुषहरूलाई प्रचार गर्ने, सिकाउने र पुरुषमाथि आत्मिक अधिकार जमाउने कुराहरू निश्चय पनि पर्न आउँछन्।
स्त्रीहरूको सेवाकार्य सम्बन्धी रहेको उपर्युक्त दृष्टिकोणलाई काट्ने त्यहाँ धेरै "तर्कहरू" प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ। पहिलो शताब्दीमा स्त्रीहरू प्रायः अशिक्षित थिए त्यसैले पावलले स्त्रीहरूलाई मण्डलीमा सिकाउन निषेध गरे भन्ने तर्क प्रायः सुनिन्छ। तरैपनि १ तिमोथी २:११-१४ ले शैक्षिक योग्यतालाई कतै उल्लेख गरेको छैन। यदि सेवाकार्यका लागि शैक्षिक योग्यता आवश्यक हुँदो हो त येशूका बहुसङ्ख्यक चेलाहरू अयोग्य ठहरिन्थे।
नयाँ नियमका प्रिस्किल्ला र फिबीलाई लिएर पनि त्यस्तै तर्कहरू अघि सार्ने गरिएको पाइन्छ। प्रेरितको १८ अध्यायमा, प्रिस्किल्ला र अक्विला ख्रीष्टका विश्वासयोग्य सेवकहरूको रूपमा प्रस्तुत गरिएका छन्। प्रिस्किल्लाको नाउँ पहिले उल्लेख गरिएको छ, सायद सेवाकार्यमा आफ्ना पतिको भन्दा तिनको "प्राधान्य" रहेकोले होला। तरैपनि प्रिस्किल्ला, १ तिमोथी २:११-१४ लाई खण्डन गर्ने किसिमको क्रियाकलापको सेवाकार्यमा सहभागी भएको कुरा कतै पाइँदैन। प्रिस्किल्ला र अक्विलाले अपोल्लोसलाई आफ्ना घरमा ल्याए र ती दुवैले उनलाई परमेश्वरको वचन ठीक-ठीकसँग व्याख्या गरिदिए (प्रेरित १८:२६)।
रोमी १६:१ पदमा, फिबीलाई एक "सेविका" को सट्टा एक "स्त्री डिकन" को रूपमा लिइयो भने पनि यसले फिबी मण्डलीमा एक शिक्षिका थिई भनेर दर्शाउन सक्दैन। "सिकाउनमा सिपालु" एल्डरमा हुनु पर्ने एउटा योग्यता हो, तर डिकनको होइन (१ तिमोथी ३:१-१३, तीतस १:६-९)। एल्डरहरू / विशपहरू / डिकनहरू "एउटै मात्र पत्नीको पति" भनी वर्णन गरिएका छन्। यस योग्यताले पुरुषहरूलाई नै जनाउँछ भन्ने कुराको यो स्पष्ट सङ्केत हो। यसको अतिरिक्ति १ तिमोथी ३:१-१३ र तीतस १:६-९ मा एल्डर, विशप, डिकनहरूलाई जनाउन केवल पुलिङ्ग सर्वनामहरू मात्र प्रयोग भएका छन्।
१ तिमोथी २:११-१४ को वाक्यरचनाले "कारण" लाई राम्ररी छर्लङ्ग्याउने काम गर्छ। १३ पदको पहिलो शब्द "किनकि" ले अब त्यसअघिको पावलको भनाइ (पद ११-१२) को "कारण" बताउन लागेको सङ्केत दिन्छ। स्त्रीहरूले पुरुषहरूलाई सिकाउनु वा उनीहरूमाथि अधिकार जमाउनु किन हुँदैन? किनकि "आदम पहिला बनाइए, त्यसपछि हव्वा। अनि आदम बहकाउमा परेनन्, स्त्री बहकाउमा परेर अपराधमा फसिन्।" परमेश्वरले पहिला आदमलाई सृष्टि गर्नुभयो र त्यसपछि आदमका लागि "सहयोगी" हुन हव्वालाई सृष्टि गर्नुभयो। प्रारम्भिक सृष्टिको यो क्रमचाहिँ विश्वव्यापीरूपमा परिवार (एफिसी ५:२२-३३) लगायत मण्डलीमा लागु हुन्छ। हव्वा बहकाउमा परेकी तथ्यलाई पनि स्त्रीहरूले पास्टरको रूपमा सेवा गर्न नहुने र पुरुषमाथि अधिकार जमाउन नहुने कारणको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। स्त्रीहरू सजिलै बहकाउमा पर्न सक्ने भएको हुनाले नै उनीहरूले सिकाउन नहुने हो भनेर कोही-कोही विश्वास गर्न पुगेका छन्। तर त्यो धारणा विवादास्पद छ, किनकि यदि बहकाउमा पर्न स्त्रीहरूलाई बढी सजिलो हुँदो हो त किन तिनीहरूलाई नानीहरूलाई (जोहरू सजिलै बहकाउमा पर्न सक्छन्) र अन्य स्त्रीहरूलाई (जोहरू यदि सजिलै बहकाउमा पर्न सक्ने हो भने) सिकाउन अनुमति दिइएको छ त? वचनले त्यो भन्दैन। स्त्रीहरूले पुरुषहरूलाई सिकाउनु वा पुरुषमाथि आत्मिक अधिकार जमाउनु हुदैन, किनभने हव्वा बहकाउमा परेकी हुन्। परिणामस्वरूप परमेश्वरले मण्डलीमा शिक्षा दिने प्रमुख अधिकार पुरुषलाई दिनुभएको छ।
परमेश्वरले मण्डलीमा आत्मिक शिक्षा दिने अधिकारयुक्त पदमा पुरुषहरूलाई मात्र नियुक्त गर्नुभएको छ, तर पुरुषहरू स्त्रीहरूभन्दा असल शिक्षकहरू हुन्छन् नै भनेर वा स्त्रीहरू तल्लो तहका वा कम बुद्धिका हुन्छन् नै भनेर चाहिँ होइन (त्यसो होइन पनि); परमेश्वरले मण्डली केवल यही तरिकाले चलोस् भन्ने हेतुले योजना यस्तै गर्नुभएकोले हो। पुरुषहरूले आत्मिक नेतृत्वको नमुना देखाउनुपर्छ ‍-- तिनीहरूको जीवनमा र तिनीहरूका बोलचालमा। स्त्रीहरूले कम अधिकारयुक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। स्त्रीहरूले अन्य स्त्रीहरूलाई सिकाओस् भनेर उनीहरूलाई अर्ती दिइएको छ (तीतस २:३-५)। साथै, बाइबलले स्त्रीहरूलाई नानीहरूलाई सिकाउने सम्बन्धमा पनि प्रतिबन्ध लगाउँदैन। स्त्रीहरू केवल पुरुषहरूलाई सिकाउने र आत्मिक अधिकार गर्नदेखि मात्र प्रतिबन्धित छन्। यसको तात्पर्य महिलाहरू पुरुषहरूमाथि पास्टरको भूमिका निर्वाह गर्नदेखि बञ्चित छन्। यसले स्त्रीहरूलाई कुनै पनि हिसाबमा कम महत्त्वको बनाउने काम गर्दैन, तर बरु उनीहरूलाई परमेश्वरको योजना र उहाँबाटका वरदानसित अझ मिल्दो किसिमको सेवाकार्य प्रदान गर्दछ।
(साभार: www.gotquestions.org को अनुमतिले यहाँ प्रकाशित।
« मानिस कसरी धर्मी ठहरिन्छ?